Maxaa looga hadlay kulankii guddiga joogtada ah ee Golaha shacabka Soomaaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa looga hadlay kulankii guddiga joogtada ah ee Golaha shacabka Soomaaliya?
Maxaa looga hadlay kulankii guddiga joogtada ah ee Golaha shacabka Soomaaliya?
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddiga Joogtada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan saacado badan qaatay maanta ku yeeshay Xarunta KMG Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Kulankan oo uu shir guddoominayay, Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa lagu fallanqeeyay ajandayaasha horyaala Kalfadhiga 7aad ee Golaha Shacabka.
Kalfadhiga 7aad oo ah kiisii ugu dambeeyay ayaa waxaa Sabtidii Magaalada Muqdisho ka furay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana jira sharciyo badan oo horyaala Golaha Shacabka, ayna tahay inay ku meel mariyaan mudada waqtigooda uga harsan.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo Arbacada kulankoodii ugu horeeyay ee Kalfadhiga 7aad ku yeelanaya Magaalada Muqdisho ayaa shirkii maanta lagu go’aamiyay in ajandaha koobaad ee Xildhibaanada ka doodayan uu noqdo Sharciga Axsaabta, sida uu sheegay Xildhibaan Maxamed Xasan Nuux oo shirka kadib faah faahiyay.
Xildhibaan Maxamed Xasan Nuux oo ah Nidaamyaha Baarlamaanka ayaa sheegay in kulankii maanta lagu gorfeeyay shuruucda mudan in looga doodo kulanka 1aad ee Kalfadhiga 7aad, ayna xubnaha isu raaceenin ajandaha koowaad in laga dhigo Sharciga Axsaabta.
Waxa uu intaa ku daray inay berrito tahay (Arbacada) in Xildhibaanada Golaha Shacabka ka doodaan Sharciga Axsaabta, isagoo buu yiri dib u eegis lagu sameynayo.
“Sidaad ogtihiinba ay tahay waqtigan lagu jiro in la dedejiyo shuruucda u taala Golaha Shacabka. Muhiimadda ugu badanina waxay ahayd Guddiga Joogtada ahi, sida ay ahmiyad u kala leeyihiin sharciyada inuu soo saaro. Dabcan waxaad ogtihiin Sharcigani Axsaabta inuu yahay kan ugu ahmiyadda badan, kolka laga reebo Sharciga Doorashooyinka”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xasan Nuux mar uu galabta la hadlayay warbaahinta.
“Marka maalmahaan waxaan is leeyahay Baarlamaanka shaqo aad u badan baa u taala, shaqadaasi si uu u gutana waxaan ogeysiin lahayn Xildhibaan walbaa ay suurageli karto inuu qayb ka noqdo dadaalka ah shuruucda inay meel maraan in uu hadda, dhakhsiyo u yimaado xarunta.”
“Dabcan waxaad ogtihiin inuu jiro xanuunkan COVID-19 oo runtii ah xanuun leh dhibaatadiisa iyo ragaadkiisa, laakiin aynaan suurtagal ahayn in loo hakan karo waqtigan lagu jiro. Sidaa darteed shaqooyinka noo yaala ee sharciyada ah inuu qof walba oo Xildhibaan ah u tafaxeeto, sidii ay suuragal u noqon lahaayen inuu wadanka helo dheelitir shuruucda dhankeeda ah, oo tan kaga aadan Baarlamaanka inay taas tahay, taasaana go’aansanay in la dedejiyo. Marka aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, waxaan sugeynaa waa 10-ka bisha oo berritoole ah in sharcigaas doodiisu ka bilaabato Golaha Shacabka.”
Halka hoose ka dhageyso Codka Xildhibaan Maxamed Xasan Nuux: